ချစ်ကြည်အေး: မင်္ဂလာနှစ်သစ် နှင့် စတုဒီသာ
SHWE ZIN U Sun Apr 17, 01:56:00 PM GMT+8
ကျန်းမာချမ်းသာ အဆင်ပြေပါစေ ကဲ ဆုတောင်းပေးပြီးလို့ အဝဆွဲသွားပြီနော်
Anonymous Sun Apr 17, 01:58:00 PM GMT+8
အဲ့ကတည်းက မနာလိုဖြစ်နေတာ.. အဟင့်ဟင့်.. ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ညှဉ်းစဲပြီ........................
(မှတ်ချက်။ ။ သီချင်းနားထောင်အကဲဖြတ်နေသည်။ ရှူးတိုးတိုး)
Mon Petit Avatar Sun Apr 17, 02:03:00 PM GMT+8
ရွှေရင်အေး မုန့်လုံးရေပေါ်စားချင်တယ် မမ
Anonymous Sun Apr 17, 02:05:00 PM GMT+8
ဟရ်.. အိမ်ကြီးရှင်က အသံကောင်းတရ်တော့.. မထင်ရဝူး...
sonata-cantata Sun Apr 17, 03:25:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ...ပန်းပိတောက်ကို ချစ်နေကြတဲ့ ချစ်ကြည်အေးတို့ စုံတွဲရေ...
ဒီနေ့ အိမ်နားက ဖြတ်သွားတယ်။
အန်တီတို့အိမ် ၀င်ရအောင်လို့ သားတို့ကတော့ ပူဆာသား...။
Anonymous Sun Apr 17, 03:33:00 PM GMT+8
ယခုပငါ စားချင်စိတ်ကို တားဆီးလိုက်ရတာ။
rose of sharon Sun Apr 17, 03:34:00 PM GMT+8
မစားရအညှော်ခံ... အဟင့် :(... သီချင်းက ကော်နက်ရှင်မကောင်းလို့ နားထောင်လို့မရသေးဘူး... နောက်မှ တခေါက်ပြန်လာနားထောင်မယ်...
ကလူသစ် Sun Apr 17, 04:34:00 PM GMT+8
မစားရတဲ့အပြင် နားပါနှိပ်စက်ခံရသေး :(
kiki Sun Apr 17, 05:27:00 PM GMT+8
ဘုရားလည်း ပူဇော်ပြီးသွားပြီ.. ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်တွေလည်း...စက္ခုအာရုံ နဲ့ အပြတ် တွယ် ပြီးသွားပြီ..
ဘိုက်ကလေးတင်းပြီးနောက် စုံတွဲ အဟဲ လေး လည်း သောတအာရုံ ခံစားပြီးသွားပါပြီ..
ကျေးဇူးတွေ တဝကြီး တင်ပါသည်..
မချစ်တို့ဇနီးမောင်နှံ ရာသက်ပန်.. အဲ. ဇနီးမောင်နှံ လည်း. ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာ ရှိပါစေ.
blueskyforest Sun Apr 17, 08:41:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာပါ ။ သင်္ကြန်မှာ သံချပ်လာထိုးသွားတဲ့အတွက် ရွှေပြည်ဝေးမဏ္ဍပ်က အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ ကျန်းမာပါစေ။ ချစ်ကြည်အေးကိုလည်း လင့်ခ် ထားလိုက်ပါပြီ။
An Asian Tour Operator Mon Apr 18, 11:54:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ အစ်မချစ် နဲ့ အစ်ကို ပန်းသီး။ နှစ်သစ် ကို မြန်မာဆန်ဆန် ဖြတ် ကျော်လိုက်တယ်ပေါ့လေ...။
Anonymous Fri Apr 29, 07:26:00 AM GMT+8
mirror Tue May 10, 08:58:00 AM GMT+8
သီချင်းဆိုတာ အတော်ကောင်းပဲ အမ ရေ.. :)